Inona no fiantrana mila bisikileta taloha? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Manome bisikileta ho an'ny fiantrana - vahaolana azo tanterahina
Manome bisikileta ho an'ny fiantrana - vahaolana azo tanterahina
Inona no fiantrana mila bisikileta taloha?
Ahoana noManomezanyBisikiletaany Los Angeles
Ny anjelyBisikiletaFanomezana an-dakozia. Safidy mahatahotra irayMilatapakabisikiletaary mahasitrana azy ireo indray.
Orange County NyBisikiletaFanomezana hazo.
Tazomy miaraka hatrany ny kodiaranaFanomezana bisikiletaary ny Recycling.
Amin'ity fizarana amin'ny China Uncensored ity dia hadinoy ny bubble stock market, ity no bubble stock bisikileta mampino an'i China. Salama, tongasoa eto Chine Uncensored. Izaho no mpampiantrano anao, Chris Chappell.
Ny bisikileta taloha tsara. Ilay soavaly vy kodiarana roa mahatoky. Na te hanana rivotra madio sy fanatanjahan-tena ianao dia ento any an-tsekoly ny zanakao na mihinana sakafo haingana any amin'ny 'WickDonald's', ny bisikileta iray ary i Shina dia miaraka toy ny fanambadiana toy ny soavaly sy kalesy. fizarana bisikileta maimaim-poana, lasa poizina ity fifandraisana ity.
Amin'ity fizarana anio an'ny China Uncensored ity dia andao hojerentsika ny fomba niovan'ny programa fizarana bisikileta any Sina ho lasa loza tanteraka. Fahasamihafana lehibe eo amin'ny fizarana bisikileta any Shina sy ny mahazatra anao any amin'ny dock US. Ho an'ny fizarana bisikileta, lazao, San Francisco na New York - mila maka azy ireo avy eo amin'ny seranana ianao ary mametraka azy ireo eo amoron-tsambo.
Ary azonao atao ny mamoha bisikileta amin'ny alàlan'ny lakilem-batana na fampiharana finday. Ny tombony dia mora ho an'ny governemanta tanàn-dehibe ny mitazona azy io amina toerana manokana s. Mora ho an'ireo orinasa mizara bisikileta ny manara-maso azy ireo ary mampiasa bisikileta hitaterana bisikileta any amin'ny toerana ilana azy indrindra.
Saingy misy ny 'olana kilometatra farany'. Izany dia nilaza fa voafetra ihany ny docka, ary raha tsy misy doza ao anatin'ny iray kilaometatra izay te-hanomboka na hamarana ny diany ny olona iray dia tsy hampiasa ny serivisy fanofana bisikileta fotsiny izy ireo. Miala tsiny amin'izay monina ao amin'ny Bronx! Saingy ny tanànan'ny Shina dia manana fanasitranana amin'ity olana kilometatra farany ity: bisikileta tsy misy dock! Misaotra ireo chip GPS isaky ny bisikileta, afaka mamoha iray amin'ny fampiharana findainao ianao.
Ary rehefa vita ianao dia avelao amin'izay tianao! Ary tiako holazaina, na aiza na aiza no tadiavinao! Indraindray ny fitsaboana dia mety ho ratsy noho ny aretina. Ity dia sarin'ny fidirana amin'ny valan-javaboary iray ao amin'ny tanànan'i Shenzhen. Aiza, araka ny ahitanao azy, ny olona mitaingina bisikileta nozaraina hatreny amin'ny fidirana ary avy eo atsipy eo ambonin'ilay antontam-bisikileta hafa be fotsiny ilay olona ary hiditra ao anatiny hijery ilay toerana.
Ny indostrian'ny fizarana bisikileta any Shina dia nitombo toy ny adala tato anatin'ny taona vitsivitsy noho ny fifangaroan'ny fifaninanana cutthroat ary tsy misy fehezan-dalàna mifehy ny governemanta. Manodidina ny 500 izao ireo orinasa mizara bisikileta mifaninana amin'ny dock any Shina, samy maniry mafy ny hahazo ny tsena amin'ny famenoana tanàna amin'ny bisikiletany miaraka amin'ny hevitra fa rehefa eo an-tampon'ny antontam-bato ny bisikiletan'izy ireo amin'ny fifaninanana. ” Tsy voafetra ny isan'ny orinasa afaka miasa amin'ny faritra iray na ny bisikileta, dia niteraka fikorontanana tsy hita maso ary mampihena ny tahotra safidy.
Heveriko fa nahatsapa izy fa tsara kokoa ny mandeha kilaometatra farany. Ny roa amin'ireo fanombohana fizarana bisikileta lehibe indrindra ao Shina dia ny Ofo sy Mobike
Eo anelanelan'izy ireo dia manana mpampiasa voasoratra anarana maherin'ny 120 tapitrisa sy bisikileta maherin'ny 13 tapitrisa any an-tanànan'ny Sinoa izy ireo. Ary ny nahatonga ny zava-bita rehetra azo trandrahana dia an'arivony tapitrisa tapitrisa dolara amin'ny renivola iainana. Ofo dia nanangona fividianana $ 1.3 miliara farafahakeliny niaraka tamin'ny sonia bisikileta mavo canary... tao anatin'ny famatsiam-bola dimy.
Ary i Mobike dia nanangona $ 600 tapitrisa tamin'ny famatsiam-bola farany farany teo. ary mitentina 1 miliara dolara ny volan'ny tsenany. Ary ireto orinasa mpanisa 10 isa ireto dia tafiditra amin'ny hazakazaka mandoro vola amin'ny fanapahana ny fizarana tsena amin'ny alàlan'ny famoahana bisikileta haingana araka izay azo atao, ary mitazona ny vidiny ambany araka izay azo atao, ary mametraka ny arabe araka izay azo atao izy ireo.
Mba hiatrehana izany dia nanomboka nandefa ekipa ny ekipa sasany haka ny bisikileta nizara. Izay misy dikany. Ity mpitaingina bisikileta ity dia tsy maintsy mitondra fiara eny amoron-dalana satria lasa môtô be ny lalan'ny bisikileta.
Ity misy andiana sary avy amin'ny zaridainan'ny bisikileta Shanghai izay an'arivony bisikileta an'arivony no miantso mody any an-trano ankehitriny.
Soa ihany fa mbola misy toerana malalaka hambolena saha goavambe misy voninkazo maro loko any Shanghai
Haha, tsia, misy bisikileta bebe kokoa. Ary bisikileta bebe kokoa. Ary bisikileta bebe kokoa.
Ary bebe kokoa bisikileta! Fa farafaharatsiny nisy fihemorana tato ho ato.
vidin'ny bisikileta peloton
Ohatra, taorian'ny nahatsapan'i Shanghai fa misy bisikileta nizara 1,5 tapitrisa - iray amin'ireo isaky ny mponina 16 izany - nanomboka nilaza izy fa ampy izay. Tamin'ny 18 Aogositra, nanokatra ny orinasam-pifandraisana bisikileta ny biraon'ny Shanghai Transp, izay nanoro lalana ny hampijanonany bisikileta eny an-dalambe.
Misy ihany koa ny tolo-kevitra any Shina hanasazy ireo olona tsy dia mijanona tsara sy manararaotra bisikileta iraisana. Ary raha misy mahay manao polisy sy manasazy ny olom-pireneny, dia ny governemanta sinoa. Araka ny tombotsoam-pirenena …… ny teknolojia fanaraha-maso ataon'izy ireo dia afaka mizaha ny mponina iray manontolo 'ao anatin'ny iray segondra'.
Fantatro fa mety hahatsapa toy ny fihaonana amin'ny Terminator tamin'ny taona 1984 tamin'ny Premium Rush mendrika izany tokoa.
Na - ary fantatro fa toa adala izany, fa henoy aho - fa tsy manasazy ny olom-pirenena tsirairay avy, dia mety hiditra an-tsehatra ny governemanta amin'ny famolavolana sy fampiharana politika feno fiheverana mba hahazoana antoka fa mihetsika tsara ireo orinasa mpanofa bisikileta. Hahazivazy fotsiny fa mora kokoa ny manafay olona fotsiny. Ahoana ny fahitanao ny loza mizara ny bisikileta ao Shina? Avelao etsy ambany ny hevitrao.
Ary izao dia izao ny fotoana hamaliana fanontaniana iray avy aminareo - ireo mpanohana ny tafika 50 cent izay mitondra tena any China Tsy voasivana any Patreon. mihevitra ve ianao fa izany no karazana mampihomehy an'ny Show hoe ahoana no tokony hisy azy? 'Fanontaniana tsara no natomboka Sinoa tsy voasivana tamin'ny taona 2012. Talohan'izay dia nandrakotra an'i Sina aho, saingy tamin'ny karazana vaovao.
Ary miala tsiny aho milaza fa tsy dia liana tamin'iza tamin'iza aho. Izay nanelingelina ahy satria fantatro fa firenena manan-danja tokoa i Shina ary misy fiantraikany lehibe amin'ny fiainantsika any Etazonia. Izany dia tamin'ny fotoana nanombohan'ny Antoko Kaominista ireo nosy namboarin'olombelona tao amin'ny Ranomasina China South, ary nilaza fa izany no faritanin'izy ireo.
Nanomboka nanangana nosy sandoka ny governemanta ary nilaza azy ireo ho faritany sinoa taloha. ”Tsia, mampihomehy tanteraka izany. Ka noho izany dia namorona an'i China Uncensored aho miaraka amin'ny tonony satria toa tsapako fa tena afaka milaza izay tiako holazaina momba ny Antoko Kaominista Sinoa aho.
Ary nandritra ny taona maro, hitako fa ny fampiasana ny satire dia tena nanintona ny mpihaino lehibe kokoa ny vaovao sy ny politika ao Shina. Ary milaza ny marina: raha nanao fandrakofam-baovao mivantana fotsiny aho, mbola hijery an'io ve ianao? Misaotra tamin'ny fanontanianao, Primo, ary raha mangataka amiko ianao hamaly ny fanontanianao, midira ao amin'ny Tafika 50 tsy misy sivana China. Ambany dia ambany ny tahan'ny fahafatesanay.
Ary iray dolara na mihoatra isaky ny fizarana fotsiny dia manome tombony kely ho anao izahay ary azonao atao ny mandefa fanontaniana hovaliako eto amin'ny fampisehoana. Mandehana any amin'ny Pateron.com/chinauncensored raha te hahalala bebe kokoa.
Misaotra anao nijery ity fizarana ao amin'ny China Uncensored ity. Averina indray, izaho dia Chris Chappell. Amin'ny manaraka indray.
Inona no azoko atao amin'ny bisikiletako taloha?
Na ny bisikileta aza tsy salamaafakaamboarina, havaozina ary averinaampiasaina. Na izany aza raha nybisikiletadia mihoatra ny fanamboarana ny ampahany lehibe amin'ny anaobisikileta talohahaverina averina ampiasaina ao amin'ny foibe fanodinana akaiky anao indrindra.
Mandeha bisikileta ve ireo fivarotana fiantrana?
Omeo ny talohaBisikiletaAmin'ny antony tsara
Azonao atao ny manome azy amin'ny lehibe kokoafivarotana fiantrana, fa azafadyAzaanontanio izy ireo raha afaka hanaiky izany eo alohanao izy ireomandraynidina hatramin'ny afivarotana, toy ny kely kokoafivarotana manaotsy mila toerana malalaka handraisana entana lehibe toy ny abisikileta.
Maka bisikileta taloha ve i Halfords?
Halfordsmihazakazaka hetsika ara-barotra-pirenena manome ny mpanjifa fotoana fanomezana tsy ilainabisikiletaho an'ny Re-Cycle any amin'ireo fivarotana antsinjarantsika rehetra.
Neil Donoghue: Androany aho mitady bisikileta an-tendrombohitra mora vidy. Mitady bisikileta an-tendrombohitra marina aho izao. Zavatra tsy dia antitra loatra ary tsy reraka loatra.
Te-hahita varotra tena izy izay vonona handeha aho. Voalohany indrindra, tena manampy ny fahalalana ny tsena, manana hevitra tsara momba ny vidin'ny bisikileta, tena mendrika hatao any amin'ny magazay, mijery an-tserasera Eto amin'ity lahatsoratra ity, manandrana mitady varotra tena izy aho, koa izaho mila mihady lalina kokoa amin'ny loharano hafa. Mba hahitana bisikileta mora sy tena an-tendrombohitra dia tsy mijery afa-tsy ny sarotra aho satria mora vidy ihany koa ary mety hitrangan'ny mpitroka hatairana tampoka amin'ny tadin-damosina aoriana na mikorontana.
Izaho koa mila zavatra azoko havaozina amin'ny ho avy raha zakako izany. Zavatra tsy dia antitra loatra satria miova ny zavatra toy ny fenitra sy ny habe. Te hanana zavatra vaovao vaovao aho ary zavatra haiko amin'ny ho avy, zavatra toy ny frein, kodiarana n kodiarana.
Andao hojerentsika ny fomba hahitanao bisikileta amidy. Voalohany, lazaiko fa raha ny tena izy dia ho hitanao eo an-toerana izany. Na aiza na aiza no itodihanao, amin'ny eBay, an-tserasera, amin'ny sokajy, satria raha ny tokony ho izy dia te hijery ilay bisikileta ianao.
Ie, fantatro fa mividy bisikileta amin'ny sary fotsiny ny olona. Mety ho azo antoka tsara raha mametraka fanontaniana mety ianao, fa raha afaka mitsidika ny bisikileta ianao dia hanampy anao bebe kokoa. Andao hanomboka amin'ny eBay.
Efa nandre momba ny eBay ve ianao? Bisikileta an-jatony, bisikileta an'arivony amin'ny eBay. Toerana lafo lafo amidy izy ity, koa mieritreritra hanao lavanty hafa na classifieds amin'ny Internet. Malaza indray.
Inona no hataoko? tianao amin'ny ebay ve ianao? mitady zavatra tena ankapobeny. Raha mametraka bisikileta an-tendrombohitra aho dia ampidiro ny fikarohana dia manomboka manivana kely kokoa azy aho dia heveriko fa misy ny varotra voalohany indrindra. Heveriko fa zava-dehibe tokoa ny ora andavanandronao ataonao.
Raha mitady fotoana tsy ampoizina ianao rehefa vitsy ny olona manodidina anao, dia mety hahita ny varotra mora azo ianao. Rehefa mifarana ny harivariva, dia misy vintana lehibe kokoa hisy ny olona an-tserasera afaka mangataka izany. Amin'izao fotoana izao dia amin'ny roa hariva. any UK dia mitady bisikileta roa aho ary avy eo manana efatra minitra.
inona no hohanina aorian'ny bisikileta lava
Misy Carrera Banshee, £ 280, tsy ratsy amin'ny bisikileta fampiatoana, Trek Fuel EX 6, £ 530.11 minitra Misy didy 17 tavela, izay malaza be. Ny iray amin'ireo zavatra tsara momba ny eBay dia ny fananana sivana maro.
Raha te-hanivana arakaraka ny haben'ny kodiarana ianao, ny haben'ny zoro, ny halaviran'ny tranonao, satria toa ny nolazaiko, rehefa mahita ny bisikileta ianao? , izany dia afaka manome anao fampahalalana bebe kokoa noho ny mijery sary vitsivitsy fotsiny amin'ny Internet. EBay tokoa dia fotoana iray hiketrehana bisikileta be dia be. Mety heveriko fa hanao fikarohana kely amin'ny fotoana samihafa amin'ny andro koa.
Rehefa mahita bisikileta tena tianao ianao dia hokapohiko ny mpivarotra ary hanadihady momba ireo zavatra namidinao taloha aho. Mety hanome anao fanazavana sasany momba ny maha ara-dalàna an'ity mpivarotra ity izany. Mandehana any amin'ny safidy manaraka, Gumtree.
Angamba ny ampahany tsara indrindra amin'izany dia ny eo an-toerana kokoa ka ahitanao ny tanàna misy anao. Ary indray, mora kokoa ny mahita zavatra ho hitanao. Heveriko fa ny fatiantoka lehibe indrindra amin'i Gumtree dia ny fantatry ny be sy ny be amin'ny fananana bisikileta halatra sy fananana halatra be dia be ao.
Mazava ho azy fa tsy ny zavatra rehetra no angalarina any, fa ny mora kokoa ho an'ny olona ny mametraka ny zavatra amidy ary mijanona ho tsy fantatra anarana, dia mora kokoa ho an'ny olona ny mivarotra zavatra halatra. Angamba ilay Gumtree, eo no manomboka, hijerena lalina kokoa ny zavatra tadiavinao ao. Avy eo manomboka mandefa fanontaniana amin'ny olona mivarotra izany.
Miezaha fotsiny hahalala raha ara-dalàna na tsia. Misy ihany koa ny bisikileta sasany eto. Misy bisikileta misy vidiny ambany kokoa any, karazana bisikileta kely fotsiny.
Ny bisikileta tena mora vidy fotsiny dia mitady bisikileta an-tendrombohitra indray ka azo atao ara-dalàna. Zavatra manintona ny masoko ity Rocky Mountain ity. Ity no Rocky Mountain Vertex.
Any Bristol, 13 kilaometatra miala ny misy ahy izao. Toa antitra kely izy. Mety ho tamin'ny 2008, 2009 angamba izany.
Manana kodiarana 27,5 izy io. Manana fampahalalana marim-pototra eto izy ka misy zavatra tokony hatao.
Tsy 26 izany ka tsy mety antitra loatra. Ny vidiny fotsiny dia £ 225. Toa varimbola izany.
Hanao lisitra fifantina aho. Safidy iray hafa mendrika dinihina ny mitady fivarotana bisikileta na koa fikambanana mpanao asa soa any amin'ny faritra misy anao izay mivarotra bisikileta nohavaozina. Ankehitriny dia mety ho mendri-piderana izy ireo ary tena niasa tamin'ny fanamarinana fa vonona ny hitondra bisikileta ary afaka mahazo antoka miaraka amin'izy ireo koa ianao.
Aza hadino ny mijery ny faritra misy anao mba hahitanao bisikileta mora vidy. Ny safidy manaraka dia ny manontany ny namanao. Heveriko fa mora izany.
Manontania fotsiny. Azonao atao ny mandefa izany amin'ny Facebook ary mahita raha misy mivarotra bisikileta amin'ny vidin'ny vidinao. Heveriko fa raha izany ianao dia mety hahita olona tsy hivarotra bisikileta mahafinaritra anao ianao.
Raha manana namana tsara ianao dia manantena fa hahita zavatra tsy nangalarina na dodgy mihitsy. Raha eo amin'ny media sosialy ianao, maninona raha mijery ny Facebook Marketplace. Ity iray ity dia toa nanjary nitombo be dia be tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, afaka mahita zavatra taonina ianao any.
Ny olana amin'izany dia mety tsy maintsy manomboka manivana zavatra ianao na mitady passageways ary zavatra maro samy hafa amidy. Ny ampahany amin'ny bisikileta efa niasa sy ny karazana bisikileta rehetra dia toa teo amin'ny faran'ny ony, saingy mety hahita varotra eto ianao raha manam-potoana hijerena ny zavatra hafa rehetra. Averina indray, ny loza mety hitranga amin'ny Facebook dia ny fametrahana ireo bisikileta mora amidy mora foana ka ahitanao bisikileta zana-kazo any.
Afaka milentika lalina kokoa ianao. Azonao atao ny mijery ny mombamomba ilay olona mivarotra bisikileta, mety tsy dia hitanao loatra izany, saingy ho hitako hoe iza no niditra tao amin'ny Facebook ianao, raha toa ka saina mena lehibe ho ahy io. Ary ny fanasokajiana ho an'ny mavokely? Fantatro fa toerana malaza ho an'ny olona io.
Nahita bisikileta teto aho taloha, ny sasany bisikileta mihazakazaka. Azonao atokisana ve ny bisikileta an-tendrombohitra hafa? Eny, tiako ny hieritreritra an'izany fa tsy misy azo antoka. Pinkbike Classifieds dia mety hahita bisikileta tena izy, izay mahatonga azy ireo ho lafo kokoa.
Raha manana teti-bola lehibe kokoa ianao, ity dia mety toerana tsara hijerena, fa mety hahita varotra lafo vidy ihany. Andao jerena kely. Cannondale M400, ary bisikileta Retro ity.
150 fotsiny ny vidiny, mahafinaritra izany, saingy efa antitra. Manana ny sachs taloha ianao eo aminy. Midika izany fa varotra izany, fa raha ny fahazoana zavatra ankehitriny, ny fiasana ary ny fanavaozana dia tsy voatery hitrangan'izany - bisikileta mahafinaritra be, £ 450, nefa tsy ho ahy.
Tena tsara izany, rockhopper manam-pahaizana 2014. Somary antitra ihany, saingy 29er. Hanana ny ankamaroan'ny geometry maoderina izy io.
Heveriko fa. Manontany tena aho raha mampiroborobo. Mety ho zavatra azo zahana izany.
Na tsy izany aza dia mbola azonao atao ny manatsara ny bisikileta sy ny zavatra. Toa tena amin'ny endriny tena tsara. Izy io koa dia misy antsipiriany be dia be izay manampy ahy hahita fa ny olona mitanisa an'io dia mahalala zavatra momba ny bisikileta an-tendrombohitra.
Heveriko fa mety hahitanao izany indrindra amin'ny tranokalan'ny bisikileta manam-pahaizana toa an'i Pinkbike Search ary ireo vaovao ireo dia manodidina ny £ 650 ka tsy fivarotana lehibe fa mora vidy ary antsoina ho misokatra amin'ny fifanarahana mety ka inoako fa nataoko izany koa ao amin'ny lisitra fohy. Ao amin'ny lisitra fohy dia Rocky Mountain Vertex. Tena tiako ny endrik'ity bisikileta ity.
Somary hafakely ihany koa io. Zavatra avy any British Columbia na rockhopper manam-pahaizana manokana, £ 400. Ny Rocky Mountain dia 225 izay kely ny varotra, fa ny rockhopper, bisikileta azo itokisana kokoa io.
Mazava ho azy fa manam-pahaizana manokana momba ny marika izy io, karazana dondona hodinihiko akaiky ireto bisikileta ireto ary angamba manolotra tolotra vitsivitsy. Mazava ho azy, tokony hiezaka ny tsy hividy moto halatra ianao. Raha manao izany ianao dia mandaka ny varotra fotsiny mba hahafahan'ny olona mangalatra bisikileta betsaka kokoa, angamba ny anao.
Mazava ho azy fa tsy anao io bisikileta io. Raha nividy ianao dia nangalatra dia mbola bisikiletan'olon-kafa. Azonao alaina izany amin'ny alaivo azy.
Ahoana ny amin'ireo fambara raha halatra ny bisikileta? Eny, raha toa tsy dia marina loatra izany, dia mety izany. Raha mora loatra ity bisikileta ity dia azo antoka fa misy lakolosy fanairana maneno, mety hanandrana manala azy ireo izany olona izany ary ohatrinona ny antsipiriany ao amin'ilay doka. Mety hiezaka ny hitazona azy ireo somary manjavozavo izy ireo satria raha nisy nangalatra ny bisikiletin'olona ary nanomboka nitady ireo andinindininy ireo izy dia afaka miseho.
Raha toa izy ireo milaza fa bisikileta an-tendrombohitra fotsiny, dia Rocky Mountain, ary tsy misy zavatra toa ny habe na taona na ny singa rehetra ao, heveriko fa azo angalarina izany. Ny zavatra hataoko dia ny Google mikaroka ity bisikileta ity. Raha Rocky Mountain Vertex ST3 io dia misy antsipiriany kely ary avy eo nangalarina teo akaikiny, jereo raha misy miakatra, ny sarin'io bisikileta io.
Raha nisy nangalatra ny bisikiletany tsara tarehy dia azo inoana fa farafaharatsiny nandefa izany tamin'ny tambajotran-tserasera na tany amin'ny Internet. Hamariko izany avy hatrany. Raha azonao atao ny maka ny laharan-kazo na ny sarin'ilay laharana izay hanampy anao.
Raha toa ka simba na simbaina amin'ny lafiny rehetra dia aza mividy azy fotsiny. Midika izany fa misy olona manandrana manafina ny mombamomba ity bisikileta ity. Any UK dia misy loharano toy ny BikeRegister na afaka manangona ny bisikiletanao amin'ny polisy ianao.
Amin'ny ankapobeny dia manao an'ity serivisy ity ianao rehefa mametraka apiraikitra kely ary manisy marika ny bisikileta. Azo antoka fa zavatra azon'ny olona atao izany raha matahotra izy ireo fa ho nangalarina ny bisikiletany, saingy azonao atao ihany koa ny mivoaka amin'ny afobe raha toa ka ao anaty lisitry ny bisikileta halatra izany bisikileta izany. Raha izao, raha anao ny fahaliananao amin'ny bisikileta, dia fotoana tokony hametrahana fanontaniana vitsivitsy amin'ny mpivarotra.
Inona no fantatrao momba ny bisikileta? Inona avy ireo singa ao? Firy taona izy io? Inona ny habeny? Tianao ve izany ary raha tsy mety aminao izany, maninona? Amidinao amin'ny sipanao, ny zandrinao lahy ve izany? Ho lakolosy fanairana kely ho ahy izany. Raha tsy tian'ny olona ilay izy dia tsy ny bisikiletany. Avy eo raha mahaliana anao sy te hahazo ilay bisikileta ianao, dia liana aminao ve ny mpivarotra any an-tranony? Raha tena liana izy fa tsy mankany an-tranony ianao, dia angamba hieritreritra aho hoe: 'Fa maninona?' Mety misy antony ara-dalàna amin'izany.
Mety te-hiaro tena ny olona rehefa manana bisikileta roa na bisikileta vaovao izy ireo ary tsy tian'izy ireo hiseho fotsiny ny olona ary hahita izay tena tsy hosoratako fotsiny satria tsy tian'izy ireo hody any aminao ianao tonga izy ireo, saingy bisikileta maro no nangalarina, lasa fotsiny ary lasa teo amin'ny toerana fijanonan'ny fiara. Mitandrema kely amin'izay ahitanao azy ireo hividianana ny bisikileta. Raha te hividy bisikileta an-tserasera fotsiny ianao amin'ny sary fotsiny, raha te hanolo-tena ianao dia mbola hijery an'io amin'ny antsipiriany araka izay azo atao.
Zahao ireo singa ao amin'ilay bisikileta. Misy zavatra toa somary maloka ve any sa? angamba somary antitra ka soloina? Atombohy ny mampiditra an'io amin'ny vidin'ny bisikileta eo amin'ny toerana voalohany, ankehitriny raha mijery an'ity Rocky Mountain Vertex ity ianao dia any Bristol, £ 225 ka mora be. Misy fambara fampitandremana kely ho ahy.
Voasariky ny paositry ny seza. Toa tafahitsoka tao anaty bisikileta izy io ary misy olona tena mila manily azy hahafahany mihetsika. Angamba ity bisikileta ity tsy mbola nokarakaraina koa.
Manana kodiarana aoriana izy. Tsy misy bara faran'ny tohatra. Tsy fantatro.
Any Bristol koa ve izany? . Bristol dia toerana milay, tiako izy io, saingy toerana mafana ho an'ny bisikileta halatra. Ao amin'ny Gumtree io.
Iray volana latsaka izao no namoaka tao amin'ny Gumtree ity olona ity. Misy fambara fampitandremana vitsivitsy saingy mieritreritra aho fa handefa an-tsoratra an'ity olona ity ary hametraka fanontaniana vitsivitsy. Jereo hoe inona ny valiny azoko sy izay tiako.
Ilay Rockhopper izay ao amin'ny Pinkbike, izaho izany. Misy sary efatra. Betsaka ny pitsopitsony momba izay voalaza ao.
Amin'ny ankapobeny, ny singa tsirairay dia voatanisa. Bisikilon'ny rainy io. Izy io no mitondra.
dikan'ny famantarana bisikileta
Milaza fa mandeha tsara ny zava-drehetra, be fifehezana, ary kilaometatra vitsivitsy no nanarona azy, tsara ho ahy ny fitaovana izay toa ara-dalàna. Any Bristol koa io. Angamba hijery bisikileta roa aho.
Ny hany tokana miaraka aminy dia £ 400. Vidiny £ 250 tany am-boalohany fotsiny ary enin-taona izy Okay, saingy azo antoka fa tsy fivarotana lehibe sy goavambe izany. Angamba raha afaka miasa kely amin'io vidiny io aho.
Na izany na tsy izany, andao hanomboka hifandray amin'ny olona. Tsy azoko ilay dia izay tena tadiaviko. Namidy haingana be fotsiny izy io.
Nandeha latsaka ny antsasaky ny andro. The Rocky Mountain, tsy nifandray tamiko mihitsy io tovolahy io ka somary miahiahy momba ilay bisikileta aho amin'izao fotoana izao fa tsenan'ny mpivarotra tokoa. Raha te hivarotra bisikileta ianao dia tian'ny olona.
Rehefa mahita zavatra tianao ianao dia mila mandroso haingana be. Soa ihany fa nanao an'ity bisikileta ity aho. Nahazo hoodoo voodoo aho.
Nahita an'ity tao amin'ny Facebook Marketplace aho niaraka tamin'ny dokambarotra £ 400. Vao iray volana. Nisy dia efatra, ity bisikileta ity.
Toa tsara loatra ilay izy ka tsy marina. Ny tompony teo aloha dia nanana ny tapakila, ary manana antony ara-dalàna koa izy hivarotana azy. Faly be aho fa tsy nangalatra ity bisikileta ity ary mazava ho azy fa manana ny tapakilako aho, manana ny nomeraon-drakitra ao aho, ka dia namidiko tokoa.
Vao nanomboka bisikileta an-tendrombohitra ilay tovolahy, nividy ity bisikileta ity, nanapa-kevitra fa tiany izy ary nanapa-kevitra faingana hifamadika amin'ny bisikileta fampiatoana tanteraka. Toa madio io. Vovoka kely io.
Soa ihany fa nanana maina tokoa isika tamin'ny volana lasa tany Angletera ka toa tsy dia nahita fotaka be ianao, vovoka kely fotsiny. Voodoo ity. Marika UK ity.
Ity dia avy amin'ny Halfo rds. Raha tsy miorina any Angletera ianao dia fivarotana fiara. Izy ireo dia mivarotra kojakoja fiara, fitaovam-pilasiana ary bisikileta izay nolazaiko fa tiako hialana satria ny Halfords dia tsy mivarotra môtely tsara kalitao tokoa.
Na izany aza, mivarotra bisikileta tsara ihany koa izy ireo ary ity dia iray amin'ny bisikiletan'izy ireo marika. Tena gaga aho. Ity bisikileta ity dia mety ho vaovao tamin'ny £ 600.
Manana famerenana tsara. Manana zoro tena tsara izy io, raha ny marina. Zoro maoderina, hardtail.
Manana tahony 50 mil izy. Manana iray avy any SETA izy io. Izy io dia manana drivetrain Shimano Deore sy M935, heveriko fa nantsoina izy ireo, freins kely mora kokoa izy ireo.
Ity dia bisikileta feno tahiry ho an'ny vola. Somary nihantona aho. Nahazo ny bisikileta 375 £ aho.
Heveriko fa varotra tanteraka izany. Ity no karazana bisikileta notadiaviko. Ny hitako fa rariny amin'ny Facebook dia ny hoe misy bisikileta taloha be dia be, bisikileta Retro be dia be no azonao vidiana.
Ny bisikileta sasany latsaky ny 200 pounds, saingy tsy dia tiako ny bisikileta antitra kokoa; Te hanana zavatra izay bisikileta tsara avy eny an-tendrombohitra aho ary zavatra tena azo havaozina. Ity dia efa manana rafitra iray. Tena nahagaga azy izany.
1x10 ihany io ka mety ho zavatra azoko hatsaraina amin'ny ho avy satria miaraka amin'ny fanampian'i Doddy avy amin'ny GMBN Tech aho, hanao asa kely amin'ity bisikileta ity aho ary hijery izay azoko havaozina eo akaikiny. Ny zavatra tsikaritro, zavatra tena mahafinaritra momba azy io, misy ny iray amin'ireny - misy lavaka ho an'ny tsipika fitetezana ao anatiny raha tianao ny hametraka azy io satria amin'izao fotoana izao dia misy toerana tokana misy raikitra fotsiny. Misy zavatra vitsivitsy azoko atao amin'ity bisikileta ity, saingy faly aho fa mahazo £ 375 ny tenako ho bisikileta an-tendrombohitra mety hipetraka tsara fa tsy vola be.
Misy lahatsoratra misy torohevitra vitsivitsy momba ny fomba hividianana bisikileta mora vidy. Raha manana torohevitra hafa ianao dia aza hadino ny mamela azy ireo amin'ireo hevitra etsy ambany. Ampio ireo mpijery namana.
Angamba misy ny tsy hitako tao. Ankehitriny manana bisikileta tsara aho. Hanao zavatra kely amin'izany aho.
Ajanony tsy hijery ny masonao, ity bisikileta ity dia hiseho betsaka kokoa amin'ny GMBN Tech. Tena te hitondra ity bisikileta ity miaraka amiko aho mandritra ny dia vitsivitsy.
Ahoana no hahazoako bisikileta malalaka?
Mety afaka mahita mety ianaobisikiletana aiza na aiza toerana misy anao - raha mbola tsy maika ianao. Zahao ny 'maimaim-poana'Fizarana ny classifieds ao amin'ny gazety eo an-toerana na Craigslist na Freecycle.com.08.07.2011
Azoko omena fiantrana ve ny bisikilako taloha?
Na ankizy na olon-dehibebisikileta afakahomena amin'ny Re-Cycle - raha mbolany bisikiletadia mbola am-perinasa, hanaiky izy ireo.fanomezanadia mora be koa. Mitadiava teboka mitete iray eo akaikin'ny misy anao (lisitra feno eto), mifidiana toerana iraynyRe-Cycle tranokala ary vitao avy eonyendrika an-tserasera12/25/2019
Misy fikambanana manao asa soa ve mila fandriana?
indrindrafiantranafivarotana tsy hanao izaoMANAIKYduvets izay efa nampiasaina. Fialofana biby any an-toerana, famonjena ny bibyfiantranana fialofana ho an'ireo tsy manan-kialofana dia mety ho feno fankasitrahana ihany koa noho ny fanomezana duvets na tokoamisytsy ilainalamba firakotratoy nybodofotsy.
Azonao averina amin'ny Halfords ny bisikileta efa niasa?
Fiverenan'iampiasainais-bisikileta afakany fivarotana ihany no ekena.Halfordsmanan-jo handàMiverenanafifanakalozanmisyampiasainais-bisikiletaho an'izaymanao izany ianaotsy manana rosia na fanamafisana ny kaomandy.iSIKAdiahamerina anaoamin'ny carte de crédit na carte de debitampiasainanyianareomandoa.
Mandra-pahoviana no hitahiry bisikileta i Halfords?
Ny filaminana rehetradiatazonina In-magazayna In-Garage hatramin'ny 7 andro hatramin'ny daty nametrahana ny kaomandy. Raha mahatsapa ianao fa mety tsy afaka manangona ao anatin'ity vanim-potoana ity dia mifandraisa amin'izay nofidinaoFivarotanana Garage ary ry zareoafakamanitatra izany amin'ny daty hatramin'ny 7 andro fanampiny.
Afaka mahazo bisikileta maimaim-poana ve aho?
Andramo ihany anefa ireo tranonkala Internet toa ny Freecycle sy Gumtreemaimaim-poanabisikileta mazàna dia tsy fahita firy amin'ireo. Mikaroha amin'ny Internet na anontanio ny tanànanao raha misy izanybisikiletadrafitra fanodinana entana any amin'ny faritra misy anao. Indraindray asa fitorianaeFAbikea dia nanome ho azy ireo izay homeny.
Aiza no ahafahako manome bisikileta any UK?
Raha manana bisikileta tsy ilaina tadiavinao ianao dia mifandraisa aminay 0845 456 2338 mba hahafahanay mifanakalo hevitra momba ny fanangonana. Mariho tsara fa ny bisikileta 20 na mihoatra ihany no azonay angonina. Raha manana fanomezana bisikileta kely ianao (na 1 fotsiny) dia azonao atao ny manome ny bisikiletanao amin'ny alàlan'ny Sue Ryder.
Aiza no ahafahako manome bisikileta ao Ft Lauderdale?
RBX dia afaka maka ny entanao amin'ny toerana voatondro anao. Manana valizy bisikileta sy tranofiara izahay raha tokony manana bisikileta maro homena. Azonao atao ny mandefa ireo entana ao amin'ny birao an-trano. 1216A NE 8th Ave, Ft. Lauderdale, FL 33304. Ora: 4p - 9p Alakam, 7a - 3p Sab, andro hafa amin'ny fotoana voatondro ihany.
Karazana bisikileta inona no azoko omena an'ireo veterana?
Ny bisikiletanao efa niasa dia mety hitondra fiovana lehibe eo amin'ny fiainan'ireo Amerikanina Veterans sy ny fianakavian'izy ireo. Azontsika atao ny mandray ny bisikileta efa niasa rehetra raha mbola misy rivotra ao amin'ny kodiarana ary afaka mandeha izany. Ilaina ary ankasitrahana ny fanomezana ataonao!